🥇 ▷ Madaxa ciyaaraha Gaming Trust Carus GXT 322C: ma xuma ✅
Madaxa ciyaaraha Gaming Trust Carus GXT 322C: ma xuma
Maalin wanaagsan dhammaantiin, maantana dib-u-eegisteyda ayaa TRUST Carus GXT 322C headset game. Cod dheer, nadiif ah, naxariis daran.
Nooca isku xirka: Wired
Nooca isku xirka: 3.5mm
Dhererka xarkaha: 100cm
Ka hortagga: 32 ohms
Jawaabta Joogtada ah: 20 Hz – 20,000 Hz
Nooca makarafoonka: Dhagta
Jidadka Wax Soo Saarka: 2
Nooca xasaasiga ah: makarafoonka loo yaqaan ‘Condenser Microphone’
Loogu talagalay ciyaaraha: Haa
Noocyada aaladaha iswaafajinta: PC, laptop, smartphone, desktop, console game
Tilmaamaha: Hagaajiyaa mugga, makarafoonka codka
Baakadaha iyo gaarsiinta
Baakadaha wargelin ah, dhalaalaya, daabacaad tayo sare leh. Sanduuqa baakadaha waxaa ku jira macluumaad ku saabsan meelaha ugu waaweyn ee farsamada iyo muuqaalka aaladda.
Sanduuqa dhexdiisa sanduuqa buluugga ah ee wax lagu muujiyo waxaa ka mid ah madax-dhejis, fiilo leh adabtarada kombuyutarka, buugga isticmaaleha, iyo xaashiyaha shirkadda.
Aaladda si ammaan ah ayaa loogu meeleeyey xirmada, si adagna loogu meeleeyay weel khaas ah oo aan la taaban karin inta lagu jiro gaadiidka.
Muuqaal iyo imtixaan
Camouflage midabaynta iyo weynaanta aaladda, dabcan, waxay muujineysaa mawduuc ciyaar oo naqshadaynta ah.
Hortayda waxaa ka buuxa qalab dhegaha la’eg oo xarig leh. Maaddada ay ka samaysan tahay, balaastig isku jirta.
Madaxa garka, iyo sidoo kale koobabka, waxay ka samaysan yihiin baco adag oo adag. Dabcan, midabkan dusha sare iyo dusha sare ayaa wax ku ool ah, raadad daabacado iyo warqado dusha laga saarayaa waa ficil ahaan aan muuqan oo aan sii jiri doonin. Waxaa mudan in lagu celiyo in labada gogosha iyo weelka ay yihiin cabbir aan caadi aheyn. Waa la ballaariyay. Baaxadda miiska madaxa waa 45mm oo ballaca koobka waa 100mm.
Qaybta hoose ee gunta madaxa iyo suufka dhegaha ayaa lagu daboolay isla agab – kani waa mesh cufan oo midab beige ah. Furiinka garka madaxa ayaa aad u qaro weyn – 17mm. Qalabka dhegaha ma aha kuwo aad u jilicsan, oo leh dhexroor ah 96mm. Waxay gudaha ku leeyihiin shabeel difaac.
Mashiinka gaduudku wuxuu leeyahay dariiqa isbadal ee labada dhinac. Waxaa jira qaybo chrome ah oo loo qaldami karo birta, laakiin waa caag. Cabbirka ugu weyn ee madaxa lagu dhejiyaa waa 32 cm. Waxaa sidoo kale halkan ku yaal sumadaynta.
Qalabka dhagaha dhagta bidix wuxuu kaloo ku rakiban yahay makarafoon fog. Wuxuu ku degay lug jilicsan oo xarig caag ah. Makarafoonku aad buu u balaaran yahay oo wuxuu leeyahay filter shaashad leh. Kordhinta waa 13 cm. Qalabka dhegta bidix wuxuu leeyahay fiilo leh ka ilaalin laabo. Dhererka fiilada waa 1 m. Waxay kuxirantahay aaladda iyadoo loo adeegsado baakad yar. Dhamaadka maddiibadda waxaa jira badal mas’uul ka ah daminta / daminta makarafoonka.
Ma jiraan kontoroolo ku yaal bannaanka banaanka.
Xirmada qalabka, soo-saaraha waxaa ku jiray fiilo ku xiridda kombuyutarka, kaas oo aad ku dhaqaajin kartid makarafoonka ku dhex-jira ee lagu ciyaaro cayaaraha codka-sheekaysiga.
Ma jiraan wax cabashooyin ah oo ku saabsan tayada dhismaha iyo doorashada agabka: ma quustaan, habka wax u eg ayaa shaqeynaya iyada oo aan wax khiyaamo lahayn, inkasta oo galaasyada caagga ah ee loo yaqaan ‘chrome plamarks’ ay ku lug leeyihiin, laakiin qeybaha ayaa si xor ah u kala go’ay, kana tegin raad-raac. Wax walba waxaa loo sameeyaa si habsami leh, oo aan lahayn cilado. Kiiska si fudud looma wasakheeyo, makarafoonku wuxuu ku yaal lug jilicsan, silig dhererkiisu yahay mitir dabacsan oo ku dheji xarig jilicsan oo leh difaac ka hortag ah, oo lagu daro fiilo dheeri ah oo PC ah oo leh shaashad heer sare ah. Dhererkooda oo buuxa ma carqaladeeyaan dhaqdhaqaaqa inta ay la shaqeynayaan madaxa madaxa. Qalabka ma uraan.
Aniga hortayda waa madax madax cayaareed qadiimi ah oo ku habboon labada madax iyo waaweynba. Makarafoonku wuxuu leeyahay xagal fiican oo wareejin ah, way fududahay inaad naftaada la qabsato. Sikastaba, sanqadhu luminta xittaa marka ay yar tahayba. Marka loo eego dib-u-eegistaha isku-xidhaha, hubinta ayaa fiican. Codkii uu soo saarey madax-weyneedku wuxuu xaq u leeyahay makarafoonnada madaxa-bannaan ee xaddiga qiimahan.
Mashiinka dhagaha ayaa leh baasiin ku filan. Ciyaaraha iyo markii aan dhagaysanayay muusikada, waxaan jeclaa dhawaaqa. Heer sare, ma ay kululeeyaan, laakiin basas ku filan. Jeclow markii cod dheer. Taleefannadan dhagaha ayaa ku qancay dhawaaqa dheer ee codka. Codku waxaa lagu hagaajiyaa iyadoo la isticmaalayo giraangiraha ku yaal dhegta bidix. Makarafoonka dhagaha ayaa leh cod aad u ballaaran.
Muuqaalka ugu horeeya ayaa ah in taleefoonada gacantu ay weyn yihiin, wax yar yar tahay, roomaanta iyo rim-ka ay ka weyn yihiin kuwa caadiga ah, makarafoon weyn. Laakiin anigu waan jeclahay isticmaalkooda, dhawaaqu waa mid aad u fiican, isku dheelitiran, mugga ayaa wanaagsan, marka loo eego ergonomik – way fiican yihiin, kama daalaan isticmaalkooda muddada dheer.